रवि लामिछानेलाई जेल हाल्न तयार रहेका दलालहरु : विदेशी केटो जर्मनी नागरिक जोस्टसित बिहे गर्ने सुजाता कसरी नेपालको उपप्रधान मन्त्री बनिन्, त्यो बेला कसरि दियो कानुनले ? – Etajakhabar
नेपालको कानुनले अहिलेसम्म दुई वटा नागरिकता लीन छुट दिएको छैन । यदि कसैले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिइसकेको छ भने उसको नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द हुन्छ ।
दुई दिन देखि हाम्रो समाजिक संजाल एउटा विषयले फेरी तातेको छ । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रबी लामिछानेका विषयमा अहिले निकै चर्चा चुलिएको छ । उनी अमेरिकी नागरिक भएको र वर्कपरमिट बिना नेपालमा काम गरिरहेकाले उनलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्दै उजुरी परेपछि यो विषयले फेरी फेरी चर्चा पाएको छ ।
अध्यागमन विभागले प्रेस काउन्सिललाई उनको राहधानी नम्बर समेत उल्लेख गरेर उनी अमेरिकी नागरिक भएको भन्दै पत्र पठाएको छ । यस अघि पनि उनका बारेमा यस्ता आवाज उठेकै थिए । तर उजुरी परेपछि भने उनी विरुद्ध कारवाही प्रकृया समेत अघि बढेको छ ।
तर लामिछानेले भने आफु अमेरिकी नागरिक नभएको आफुसंग अमेरिकाको भिषा समेत नभएको भन्दै सामाजिक संजालमा प्रतिकृया दिएका छन् । तर उनले कहिले आफुले राहधानी फिर्ता गरेको भन्ने कुरा भने खुलाएका छैनन् । रवि लामिछाने केही वर्ष अमेरिकामा बसेका नागरिक हुन् । अध्यागमनले लेखेको पत्र अनुसार उनीसंग अमेरिकी पासपोर्ट रमेत रहेको देखिन्छ । तर उनले त्यो राहधानी भिर्फ गरिसेको हो भने उनी माथिको कारवाही प्रकृया गलत हो ।
रविले आफ्नो फेसबुक वालमा यसको स्पस्टिकरण भिडियो मार्फत नै दिएका छन् जुन अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ ।
उनी माथिको यो चर्चा सुरु भएसंगै लामिछानेका पक्ष र विपक्षमा दुई धार देखिएको छ । एउटा समुह हामफालेर रविको पक्षमा उभिएको छ भने एक समूह जसरी पनि रबीलाई खुइल्याउने पक्षमा देखिएको छ । यि दुवै घातक प्रयास हुन् ।
नुवाकोट घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने लक्ष्मण बिकले लामिछाने माथि कारवाहीको माग गर्दै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको आधारमा उनी माथिको छानविन सुरु भएको हो । सोही क्रममा प्रेस काउन्सिलले लामिछानलाई पत्र काट्यो । त्यसको प्रतिउत्तर लामिछानेले निकै आक्रामक र अराजक तरिकाले दिएको देखिन्छ । लामिछानेले पत्रकारहरुको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिललाई चुनौती दिँदै भनेका छन्९ ‘ढोंगीहरुको अग्रता रहेको काउन्सिलले पठाएको पत्रलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिन्न‘।। ।’
पत्रकार, राजनीति दलका नेता अथवा अन्य जो कोही किन नहोस देशको कानुन सबैले मान्नु पर्छ । यदी गैरकानुनी रुपमा रबी लामिछाने बसेका छन् भने उनी माथि कारवाही हुनुपर्छ । तर यति भनिरहंदा कोही एक ब्यक्ति माथि मात्र नियतबस छानविन हुनु हुंदैन । लामिछानेलाई जस्तै प्रश्न उठाइएका अनुराधा कोइराला, सुजाता कोइरालाहरु माथि पनि छानविन हुनुपर्छ । राजनीतिक आवरणमा कसैले उन्मुक्ति पाउने तर कोही भने समाजका लागि राम्रो काम गर्छु भन्दा भन्दै सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा मान्य हुदैन ।
महिलाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने र नेपाली महिलासित बिहे गर्ने विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग र बहस चलेपनि कानुनले अहिलेसम्म दिएको छैन । त्यसको अर्थ कुनै नेपाली महिलाले विदेशी केटोसित बिहे गरि भने उ लोग्नेको घर जानुपर्छ । त्यसैले, जर्मन नागरिक जोस्टसित बिहे गर्ने सुजाता कोइराला नेपाली भन्दापनि जर्मन नागरिक हुन् भन्ने धेरैको तर्क छ । नेपाली कानुन अनुसार विदेशी केटोसित बिहे गरेकी सुजाता कसरी नेपाली नागरिक भइन् । किनभने विदेशी नागरिकसित बिहे गर्नासाथ उनको नेपाली नागरिकता स्वत: खत्तम हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् धेरैले । त्यसैले, उनी विदेशी नागरिक हुन् कानुन त । विदेशी नागरिकलाई के नेपालमा मन्त्री बन्ने छुट छ ?
२०४५ सालको जन आन्दोलन सफल नहुन्जेल सम्मपनि सुजाता कोइराला (जोस्ट) आफ्ना जर्मन पत्नी सँगै जर्मनीमा थिइन् । राजनीतिमा उनको कुनै संलग्नता देखिएको थिएन । सक्रिय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर बहुदलीय व्यवस्थामा ल्याउन निकै नेपालीले ज्यान दिए, मेहनत गरे । उनी त्यो कठिन परिस्थितिमा विदेशमा बसिन् । जब देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो तब सुजाता आफ्ना बाउ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शक्ति प्रयोग गरेर राजनीतिमा टुप्लुक्क देखा परिन । एकाएक कांग्रेस राजनीतिमा उदाइन् । बाबुको पहुँचलाई नगद गरेर भ्रष्टाचारका अनेक गाथा बुनिन् । लाउडा काण्ड र धमिजा काण्डमा करोडौँ करोड भ्रष्टाचारका कथा रचिन् । तर बाउको पहुँचको अगाडि कसैले केही छुन सकेन ।
फेरी देशमा राजतन्त्र फाल्ने दोस्रो जन आन्दोलन भयो । आन्दोलन निष्कर्षतिर पुग्दै गर्दा व्यापक दमन र धरपकड गर्‍यो ज्ञानेन्द्र सरकारले । थुप्रै नेता बन्दी बनाइए । सयौंले यातना पाए । त्यही बेला सुजाता भने जन आन्दोलनलाई छोडेर भाग्दै भारत पुगेकी थिइन त्यहाँबाट उम्किन । जब अलि सहज स्थिति बन्यो देशमा अनि फेरी उनको सक्रियता चुलियो । गणतन्त्र ल्याउन अनेक यातना खपेका, प्रजातन्त्रका लागि ज्यान फालेकाहरुको स्थिति दयनीय रह्यो । तर सुजाता पुगिन सत्ताको माथिल्लो सिँढीमा । यहाँपनि आशीर्वाद उनै पिता गिरिजाको थियो । उनको चुरीफुरी र लूट अहिलेसम्म कायम छ । मेशिन रिडेबल पासपोर्ट काण्डमा भ्रष्टाचारका लागि झन्डै उनले नेपालको राष्ट्रियता भारतलाई सुम्पिन लागिसकेकि थिइन् । विदेशीसित बिहे गरेको । उतै बालबच्चा पाएको । नेपाली नागरिक बन्न नपाउने व्यक्तिले जस्तो मनपरी पनि गर्न पाउँछ ?
सुजाता स्वयं विदेशी नागरिक हुन् । जर्मन लोग्नेबाट जन्मिएकी उनकी छोरी यसैपनि नेपाली होइनन् । जर्मन नै हुन् । उनको ज्वाइँ झन् बंगलादेशी नागरिक । विदेशी नागरिक भैसकेकि सुजातालाई नेपालको कुन कानुन अनुसार परराष्ट्र मन्त्री बन्ने छूट मिलेको हो । आफैँ विदेशी भएर उल्टो आफ्नी विदेशी छोरी र विदेशी ज्वाईलाई कुन हैसियतले नेपालमा राखेकी छन् सुजाताले ? के त्यसको छानबिन हुनु पर्दैन ? विधिको शासनको कुरा गर्ने नेपाली कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्छ- कुन आधारमा विदेशी नागरिक सुजाता जोस्ट नेपालको परराष्ट्र मन्त्री बनेकी हुन् ?
अहिले आम नागरिकले भनिरहेका छन्- सुजाता नेपाले नागरिक होइनन् । उनको छानबिन गरिनुपर्छ । के अब नेपाली कांग्रेसको त्यो नैतिकताभित्र पर्दैन सुजाताको नागरिकता के हो ? उनी कुन देशकी नागरिक हुन् भन्ने छानबिन गर्नु ? विदेशीलाई नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री बनाएर उसले विधिको शासनको वकालत गर्ने ? कानुनी राज्यको कुरा गर्ने ? यी विदेशीहरू नेपाललाई ठग्न आएका हुन् । नेपालको बारेमा चिन्ता र हित चाहेको भए सुजाताले किन नेपालीसित बिहे गरिनन् । किन नेपालमा जब राजनीतिक संकट हुन्छ त्यो बेला भाग्छिन् । किन आफ्नी छोरीलाई विदेशीसित बिहे गराइन् ? किन कहिल्यै नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता गर्दिनन् ? विदेशी लोग्ने, विदेशी ज्वाइँ चाहिने भए बस्ने चाहिँ नेपालमा किन ? यी सारा नेपाललाई कंगाल बनाउन, लुट्न बसेका हुन। र त्यसको संरक्षक नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको छ।
यदि नेपाली कांग्रेसले त्यसको वास्ता गर्दैन भने आम सचेत नेपाली नागरिकहरू उठ्नुपर्छ त्यसका विरुद्ध । यी विदेशी सुजाता कोइराला, उसकी विदेशी छोरी मेलानी र ज्वाइँ रुबेललाई तत्कालै नेपालबाट लघार्नुपर्छ । तिनलाई नेपालको कानुन उल्लंघन गरेबापत पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । यी विदेशीलाई नेपालका बारेमा बोल्दै हिँड्ने के अधिकार ?
(यस समाचारमा हामीले प्रदिप पौडेलको लेखलाई पनि समेटेर यो सामग्री तयार परेका हौ)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०७, २०७५ समय: १६:३५:०२